Shiinaha Dhammaan hal-waddo warshad mashiinka calaamadeynta iyo alaab-qeybiyeyaasha | MAKIINADDA ACE
Mashiinka calaamadeynta wadada oo dhan
TW-FJ Mashiinka Calaamadaha Kneader-ka ee All-in-one waa mashiin fara badan oo gacan-ku-riixis ah oo lagu dhajiyay mashiinka dhalaalaya kululaynta iyo mashiinka calaamadeynta, kaas oo lagu dabaqi karo mashaariic yar yar laakiin kala firidhsan oo kala firdhisan sida qayb badan, dugsiga, xaafadda la deggan yahay iyo warshad. Mashiinka ayaa cabir ahaan iyo culeys ahaanba yar, fudud oo ku habboon hawlgalkiisa oo keliya laba hawlwadeen oo keliya oo shaqeeya.
Mashiinka ayaa si gaar ah loogu adeegsan karaa mashaariic yar yar laakiin kala firidhsan oo firidhsan sida meelaha baabuurta la dhigto, dugsiga, xaafadaha la deggan yahay iyo warshadda. Mashiinka ayaa cabir ahaan iyo culeys ahaanba yar, fudud oo ku habboon hawlgalkiisa oo kaliya laba hawlwadeen oo keliya ay ku shaqeeyaan.
TW-FJ Mashiinka Calaamadaha Kneader-ka Dhammaan-in-hal
Qiyaasaha dibedda (L * W * H) 1200X900X1100mm
Wadarta miisaanka mashiinka 220KG
Dahaarka awoodda haanta wax 120KG
Awoodda sanduuqa kuusha dhalada 25KG
Dharka dhumucdiisa 1.2--4mm
Habka kuulashada kuusha Qalabka Gear, Si otomaatig ah u xajin
Heerkulka maadada kululaynta kululaynta 170-220 ℃
LPG dhululubo caadi ah 15KG
Balaadhinta calaamadeynta 100、150、200、300mm ， oo aad loogu adeegsan karo khadadka zebra ee 400、450mm
Waxtarka shaqada maalinlaha ah 150m2
Qalabayn kara darawalka kor u qaadista, saxanka kor u qaadaya, kursiga kor u qaadaya？ Kordhinta Saxanka / Kordhinta Kursiga
Silsiladda gacanta lagu kaxeeyo ayaa wadayaasha kiciya si ay uga xanaajiso walxaha dhalaalaya, iyagoo fudud oo hawl ku jira.
Foornada dhexdhexaadka ah ee khaaska ah waxaa loo qalabeeyay adeegsiga warshadaha, taas oo leh waxtarka kuleylka sare iyo dhalaal deg deg ah.
3. Furaha furaha korantada ee koontaroolka ah ee wadada dabka ayaa u oggolaan kara hawlwadeenku inuu eego xaaladda dabka candhuufta oo uu hagaajiyo kantaroolaha wadada dabka iyo ololka. Sidaa darteed ka dhig sumadda shaqada mid aamin ah oo ka waxtar badan.
4.Laba xidhmooyin soo saarid guuritaan ah ayaa ka soo baxa gaaska qiiqa waqtiga si loo ilaaliyo jawiga shaqada wanaagsan.
5.Triple-lakabyo saari saari waxay ka dhigeysaa mid ku habboon in la nadiifiyo mashiinka iyo beddelo qalabka dhalaalaya ee midabo kala duwan
1.Ma hagaajin karaa dhumucda khadka? Oo sidee?
3. Ka waran adeegga iibka kadib?
A: A: Waxaan mas'uul ka nahay inaan bixinno talobixin farsamo oo ku saabsan nolosha mashiinka oo dhan. Waxaan kaa caawineynaa xalinta dhibaatooyinka dhanka Whatsapp, Skype, iyo emayl adoo udiraya sawiro iyo muuqaalo.
4.Sidee loo calaamadeeyaa khadadka ballac kala duwan?
J: J: Waxay ku jirtaa xulashadaada. Badanaa, waxaan kugula talineynaa maraakiibta badda oo bixisa qiime macquul ah. Sidoo kale, meelaha dayactirka, waxay ku jiri kartaa FEDX, DHL iyo xawaarahooda caalamiga ah ..
Hore: Mashiinka calaamadeynta wadada oo buufiyo qabow
Xiga: Mashiinka Calaamadaha Wadada
Honda Gx35 Dhalashada Dhalashada La taaban karo ...
1680KG oo leh 0.045CBM Haydarooliga Mini Excavator